ဝါကွှား Pt ရန် built.2— ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
Air ကိုယော်ဒန်မြစ်အထင်ကရရှိပါတယ်. ငါအများကြီးသော်လည်းတက်ကြီးထွားလာသူတို့ကိုမဝတ်ခဲ့, မိဘတွေရဲ့ငါ့ကိုရီစရာစျေးကြီးဖိနပ်ကိုဝယ်ရန်ငြင်းဆန်သောကြောင့်,. ငါကမကြိုက်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်ငါမတစ်စုံအပေါ်ငါ့လက်ကိုမရစဖူးပေသိသ. ဒါနဲ့ရငျဆိုငျဖွရှေငျးဖို့အတင်းအဓမ္မခဲ့ - သူတို့မတည်ရှိခဲ့ဟန်ဆောင်နေဖြင့်. ဒါဟာ Reebok လက်ဝါးကပ်တိုင်သင်တန်းဆရာစတိုင်ကွကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ဖို့ကြိုးစားနေနှစ်ပေါင်းကြာမြင့်စွာစုံတွဲခဲ့သည်. သို့သော်လည်းငါသည်အဟောင်းတွေတယ်အဖြစ်, ငါယော်ဒန်မြစ်ကိုလျစ်လျူရှုရန်ခက်ခဲခဲ့ကြသဘောပေါက်. သူငယ်ချင်းတွေကိုအားလုံးတစ်စုံသို့မဟုတ်နှစ်ခုခဲ့, နှင့်ငါ့မိတ်ဆွေတယောက်သူတို့နှင့်အတူကူးပြောင်းခြင်းကိုလုံးဝအစွဲအလမ်းခဲ့သည်.
အသစ်တစ်ခုကိုစတိုင်ထွက်လာသောအခါ, သူအချို့အခမဲ့အချိန်သောအခါသူ့ကိုဒေသခံ Foot Locker အားဖြင့်ရပ်တန့်မလို; သူကအသစ်တစ်စုံရတဲ့ပတ်ပတ်လည်သူ၏အသက်တာကိုတည်ဆောက်. သူအပေါငျးတို့သယော်ဒန်မြစ်လွှတ်ပေးရန်ရက်စွဲများကိုသိသခြောလုပ်, သူကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အဆင်း၌တူညီသောဖိနပ်ကိုဝယ်မယ်လို့, သူကမကြာခဏဖိနပ်စတိုးဆိုင်များ၏ရှေ့မှောက်၌ထွက်စားခန်းချကြ၏စနေနေ့နံနက်သုံးစွဲသွားမည်ဟု. ဒါဟာကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးမှုတ်. ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်မေးမြန်းခဲ့ရ, “ဒီဖိနပ်အကြောင်းကိုဒီတော့အထူးကားအဘယျ?! ရှင်းနေသည်မှာငါတစ်ခုခုအပေါ်ထွက်ပျောက်ဆုံးတာပါ။”
ယော်ဒန်မြစ်နဲ့ငါ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့စွဲလမ်းကြေညာချက်ကိုဖန်ဆင်း. စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်စေမ, ထိုဖိနပ်အဘို့သင့်အသက်ကိုများအားပြန်လည်စီစဉ်ရကျိုးနပ်ခဲ့ကြကြောင်းကျယ်သောအသံနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟုဆိုခဲ့သည်. သင်၏အသက်တာကြေညာချက်အဘယျသို့သောလုပ်ပေ?
အကြှနျုပျ၏ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံးပို့စ်, ကျနော်တို့အစားကိုယျ့ကိုယျကို၏ဘုရားသခင်၌ဝါကြွားဖို့ငါတို့စကားကိုကိုသုံးသင့်ကြောင်းစောဒကတက်. ထိုအခါငါပင်ထပ်မံသွားလေ၏, ဘုရားသခင်ကအလွန်အကြောင်းပြချက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းသည်ဟုဆို. သို့သော်လည်းငါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွားငါတို့စကားကိုမှကန့်သတ်သင့်ပါတယ်ထင်ကြပါဘူး. ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်နှုတ်ခမ်းနှင့်တကွသခင်ဘုရားအပေါ်ဝါကွှားသငျ့သ​​ညျမသာ, ငါတို့သည်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာနှင့်အတူကိုယ်တော်အပေါ်ဝါကွှားသငျ့တယျ.
သင်ပြုအရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်အကြောင်းကြေညာချက်ကို. သငျသညျအစာစားတိုင်းမုန့်ညက်, သငျသညျယူတိုင်းစမ်းသပ်, every hour you work says something about your Creator. So even if you choose to keep your mouth closed about Him, သင့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဆဲဟုပြောများများရှိလိမ့်မည်. အဆိုပါမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: မင်းဘာပြောနေတာလဲ?
သူ၏အကျော်ကြားဆုံးတရားဟောချက်ထဲမှာ, ယရှေုသညျဤအကပြောပါတယ်: "သင်တို့အလင်းကိုလင်းကိုအခြားသူများရှေ့မှာအစို့, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven” (မဿဲ 5:16).
ယရှေုသညျတောက်ပတဲ့ဘဝအသက်ရှင်ဖို့နားထောငျသူကိုပြောတယ်, အခြားသူများကိုရှေ့တော်၌ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်နှင့်ပြည့်ဝ၏. သင်တို့မူကားသူဟုမဆိုပေသတိထားမိမှာ, အဆိုပါရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုန်းအသရေကိုမက "လူခရစ်ယာန်တွေဟာဘယ်လောက်အံ့သြဖွယ်မြင်ရပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်။ ", ဒါပေမယ့်အခြားသူများကို "ရန်ဘုန်းအသရေကိုပေးလိမ့်မယ်လို့ [ကျွန်တော်တို့၏] ကောင်းကင်၌တည်ရှိ၏။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းသောဘုရားသခင်အားထောက်ပြသောသူခမညျးတျော.
ထိုသို့စဉျးစားကွညျ့. ကျွန်တော်တို့အမှိုက်တူအခြားသူများကိုပြုမူဆက်ဆံသောသူတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ကလူနေလျှင်ဘုရားသခင်အကြောင်းအဘယ်သို့ပြောပါဘူး? ကသှားမညျဖို့ဘာဆက်သွယ်ဖို့ပါဘူး? မသာပါကဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းတန်ဖိုးမရှိကြောင်းပြောပါဘူး, ဒါပေမယ့်လည်းငါတို့ဠာ၏အလယ်ဗဟိုနေဆက်သွယ်. သူတို့အမှုအရာများကိုမတည်မမှန်သည်, ကျွန်တော်အခြေခံအားဖြင့်အခြားသူများအားဘုရားသခင်အကြောင်းမုသာစကားကိုင်.
သို့သော်လည်းအဘယ်သို့လျှင်အစား, ကျွန်တော်တို့သိသိသာသာကြိုးခဲ့ကြနှင့်ငါတို့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအဘို့ငါတို့ဘဝတွေကိုချ? ကျွန်တော်တို့အခြားသူများရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကူညီပေးဖို့ရက်ရက်ရောရောပေးလေ၏လျှင်အဘယျသို့? ကဘုရားသခင်အကြောင်းကြေညာချက်အဘယျသို့သောလုပ်ပေ? ဒါဟာကျနော်တို့ဠာ၏အလယ်ဗဟိုမဟုတ်ပါဘူးကြောင်းဆက်သွယ်နှင့်အဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအသက်ရှင်ရန်ကြီးကျယ်သောအရာတစ်ခုခုရှိရဲ့. ဒါဟာဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းကိုငဲ့ကှကျရနျဖွစျသညျကိုပြသ, ကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့အဖြစ်ကိုအခြားသူများကိုချစ်ချင်ကြောင်း.
သငျသညျလုပ်တိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ဖြစ်သည့်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်, သင့်ကိုဖန်ဆင်း၏ကျေးဇူးတော်ထင်ဟပ်. တစ်ခုချင်းစီကိုဒုတိယတစ်ဦးမော်နီတာဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်, showcasing snapshots of His glory. And when those around us catch glimpses of that goodness, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလင်းတော်သည်သာမှုန်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကြောင်းသူတို့ကိုပြောပြရ.
အဆိုပါအမှန်တရား, ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နှုတ်ခမ်းနှင့်ကွှားပွောလက်တော်၌လက်ဝင်. သာကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာနှင့်အတူဝါကွှား အကယ်., လူ့ကောင်းတဲ့လူပါပဲယူဆစေခြင်းငှါ. သူတို့ကဒီလိုကောင်းသောအသက်တာအသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမိမိတို့ရဲ့ခှနျအား, ပစ်စညျးအဘယ်သူသည်သိမည်မဟုတ်. ထိုအခါငါတို့စကားကိုဘုရားသခငျသညျအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်ဟုပြောလျှင်, ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာမဟုတ်ရင်ပွောဆို, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုများယုံကြည်ကိုးစားမှုဆုံးရှုံး. ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးလုပျဆောငျရမညျ.
သင်၏အသက်တာဘုရားသခင်အကြောင်းကြီးသောအမှုတို့ကိုဆိုရမည်လော? သင့်ရဲ့လိမ္မာပါးနပ်ဘန်ပါစတစ်ကာနှင့်ခရစ်ယာန်တက်တူးထိုးလုံလောက်မဟုတ်. သင့်ရဲ့ချက်နဲ့အဘယ်သို့ပြောပါဘူး? တခြားသူတွေနဲ့သင့်ရဲ့ interaction ကအဘယျသို့ဆိုကြ? သင့်ရဲ့အလုပ်ကျင့်ဝတ်အဘယ်သို့ပြောပါဘူး? ငါမသင့်သကဲ့သို့ငါကိုယ်တော်အပေါ်ဝါကွှားပျက်ကွက်၏နေ့စဉ်နောင်တရရန်ရှိသည်ကိုသိ. ဘုရားသခင့အပေါင်းတို့ထက်လွန်ကဲသည်, ဒါကြောင့်ကျွန်မသူ့ကိုငါကမုသားနေထိုင်သောတာပါသေးငယ်တဲ့ကြည့်ရှုစေသည်တစ်လမ်းအတွက်အသက်ရှင်နေထိုင်ရသောအခါ.
အဠာထဲမှာဘာမှပေါ့ပေါ့လိင်ထက်ပိုပြီးအဖိုးတန်ရှိပါသလား, ဒါမှမဟုတ်အလုပ်မြှင့်တင်ရေး, ယော်ဒန်မြစ်၏ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံ? ၏သင်တန်းရှိပါတယ်. သင်၏အသက်တာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ. ဒါဟာတုန်လှုပ်ဖွယ်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်တူပုံပေါ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့မစိုးရိမ်ပါ - သင်ကအဘို့တည်ခဲ့သည်.
Chymdii • သြဂုတ်လ 27, 2013 တွင် 1:55 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
This is so insightful! Thank you so much for making me understand this…ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ!
Meshan • သြဂုတ်လ 27, 2013 တွင် 2:00 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အကြီးအ post ကို!!! သင်နှင့်သင်၏မိသားစုကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ.
patriciadorimain • သြဂုတ်လ 27, 2013 တွင် 2:00 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
SdoubleU • သြဂုတ်လ 27, 2013 တွင် 5:20 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကိုက် • သြဂုတ်လ 28, 2013 တွင် 12:48 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဖေါ်ပြ: ငါအွန်လိုင်း Read အဘယျသို့ – 08/28/2013 (နံနက်။) | Emeth Aletheia
KThomp • သြဂုတ်လ 27, 2013 တွင် 9:18 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Great perspective for us 80s and 90s kids who remember the Jordan era vividly. ကံမကောင်းသဖြင့်, I still see some of that kid in me and many times don’t realize it until after I’ve reprioritized just enough of my life to makeamess of things. Praise the lord for his grace and forgiveness! Glad I ran across your blog, keep writing for Him.
tiffleroux • သြဂုတ်လ 27, 2013 တွင် 11:02 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကိုက် • သြဂုတ်လ 28, 2013 တွင် 12:46 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Nesu • သြဂုတ်လ 28, 2013 တွင် 10:32 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
HannahWell • သြဂုတ်လ 28, 2013 တွင် 10:57 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျ Lee ကခရီးစဉ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် <3
မိုက်ကယ် • သြဂုတ်လ 28, 2013 တွင် 11:40 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
TreverlyHillz • သြဂုတ်လ 28, 2013 တွင် 12:03 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
This is indeedavery tough subject. But what about Christianity is easy, မှန်သော? The difficulty for me arises in living my life so that people see that it is the light of God shining and not just the light of another nice guy. Question for the community: What areafew nonverbals that we can incorporate so that people can differentiate our lives from the lives of other “ကောင်းတယ် & serving” လူထု?
ဖေါ်ပြ: What’s Your Life Saying? |
Arlicia • သြဂုတ်လ 28, 2013 တွင် 1:22 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
I am simply floored by GOD’s overwhelming conformation by way of your blog. In two separate occasions, we basically wrote about the same things. I’d love to share my writings with you. I even did the Jordan comparison and all!!!! As well as Matthew 5:16. Please let me know where I can share my own writings of self conviction. I indeed haveapowerful responsibility of my pen and it is more evident after reading your blog!!! မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!!
Renatto • သြဂုတ်လ 28, 2013 တွင် 1:22 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဂရိတ် post ကို! Challenged and encouraged.
Holly • သြဂုတ်လ 28, 2013 တွင် 2:37 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး- nailed it! Thnk U, for allowing r gr8 God2use U to speak truth! I LUV the lyrics & try my hardest2live by: ‘Let my life be the proof of YOUR LOVE’. Everyday I pray, ‘Lord, use me for ur Glory today’.
Thx & ❤ Trip :c ကို)
sleems • သြဂုတ်လ 28, 2013 တွင် 3:36 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Ndwila • သြဂုတ်လ 28, 2013 တွင် 7:12 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
UnhaeHan • သြဂုတ်လ 29, 2013 တွင် 4:33 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အားပေးမှုများအတွက်သင်ကအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါသည်. It compels me to check my bankbook and work ethic…
Mallory • သြဂုတ်လ 29, 2013 တွင် 3:24 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! Your insights are encouraging and convicting. I def don’t give God the credit with my mouth as I am called to do. Good to see the Word in that we are called to boast…နှင့်ကောင်းတစ်ဦးအရာပါပဲ!
YouthExplosionForChrist • စက်တင်ဘာလ 1, 2013 တွင် 10:38 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
This site is amazing ,very encouraging. Will be sharing your sermons with our youth. Your music has already inspired them, to have another way to give them God’s word that they will be receptive to is always suchablessing. Thank you for answering the call. ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ.
ဖေါ်ပြ: Views & Tweets: စက်တင်ဘာလ 4, 2013
Godson • စက်တင်ဘာလ 5, 2013 တွင် 11:52 နံနက် • ပြန်ကြားချက်